Zu Pultrusion Umngundo, Esifa nokubunjwa, Pultruded zabucala - Jinglong
Zu (Fibreglass) Pultrusion Die
Zu (Fibreglass) Pultruded zabucala
Zu (Fibreglass) Round Tube
Zu (Fibreglass) Square Tube
Zu (Fibreglass) kweentonga
Zu (Fibreglass) Channel Steel
Zu (Fibreglass) Angle Steel
Zu (Fibreglass) I-msebe Steel
Zu (Fibreglass) Iinkangeleko Waxonxa
zu zokuvala Connector
Zu (Fibreglass) Flat zabucala
Zu (Fibreglass) Iinkangeleko nokubunjwa
Zu (Fibreglass) Fence
Zu (Fibreglass) insulation ileli
Zu (Fibreglass) igqunyiwe ileli esitulweni
Zu (Fibreglass) nothango lwaso lobhedu
Polymer Plastic usifake grille
Zu (Fibreglass) Ukubumbela Die
Zu Pultruded zabucala
Zu Pultrusion Die
Zu wabumba zabucala
FPR Ukubumbela Die
Zu zokuvala ileli esitulweni
zu Kucingo olubiyele
Xinxiang Jinglong Composite Materials Co., Ltd. yasekwa ngo-1995 Le nkampani elungiselelwe R & D, uyilo kunye nokulungiswa zu ekubunjweni pultrusion, iyafa wabumba profiles pultruded. Le nkampani kuthatha indawo engaphezulu kwama 5,000 square metres, kwaye ngaphezu kwama-30 Iiseti izixhobo ezahlukeneyo umatshini, ezinkulu-abasakhasayo amaziko CNC machining, oomatshini lokugaya ophezulu-ngqo, njl, kwakunye nezixhobo uvavanyo ogqibeleleyo. It is a abaxhakaxhaka ukhuselo lokusingqongileyo lweshishini ngokukodwa kwi-R & D, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo zu.
ukuzibophelela quality Product
· Le inkqubo yokuvelisa imveliso kunye novavanyo zibe neerekhodi ezisemgangathweni kunye data zovavanyo.
· Kuba nokuvavanywa komsebenzi wemveliso, siya kwamkela ngokunyanisekileyo ukuba atyelele kwinkampani yonke inkqubo kunye nokuhlolwa komsebenzi ngokupheleleyo. Emva kokuba imveliso kuqinisekiswa, iya kufakwa ithunyelwe.
ukuzibophelela ixabiso lemveliso
· Ukuze kuqinisekiswe ukuthembeka ephakamileyo inkqubela imveliso, ukukhethwa kwenkqubo isebenzisa iimveliso umgangatho uphawu lizwe okanye bamanye amazwe.
· Phantsi kweemeko ezifanayo nokhuphiswano, inkampani yethu kuya kukunika ixabiso okungcono ngexabiso kakuhle ngaphandle ukunciphisa yokusebenza zobugcisa iimveliso kwaye ukutshintsha iindawo mveliso.
Delivery time nokuzinikela
· Njengokuba kude kangangoko kunokwenzeka ngokweemfuno zabathengi, ukuba kukho iimfuno ezizodwa yaye kufuneka igcwaliswe kwangaphambili, inkampani yethu ngokukodwa ukulungiselela ukuveliswa kunye nofakelo, yaye sizame ukuhlangabezana neemfuno zabathengi.
· Service kakhulu: fast, izigqibo, oluchanekileyo, nonolwazelelelo ngokucokisekileyo.
· Injongo Service: umgangatho Service iphumelele ngokwaneliseka.
· Umgaqo Service: Ukuba kukho umgangatho engaqhelekanga okanye izikhalazo ezivela kubaxhasi, inkampani yethu ukunxibelelana ngendlela ngexesha nokusingatha ngokufanelekileyo umgaqo umthengi kuqala.
zone agglomeration Industrial, icandelo ngasentshonalanga yendlela renmin, isixeko xinxiang
Fiberglass Rectangular Tube, Waxonxa Iinkangeleko Flat, Customized Frp Gutter Cover Plate, Bolt Owenza Machince, Zu Pultrusion Die, ISMC Ukubumbela Die,